यौनकर्मी महिलालाई पठाएको म्यासेज छोरीकोमा पुगेपछि ! - Everest Dainik - News from Nepal
यौनकर्मी महिलालाई पठाएको म्यासेज छोरीकोमा पुगेपछि !
काठमाडौं । अमेरिकामा एक व्यक्तिले झुक्किएर आफ्नै छोरीलाई अश्लील संदेश पठाएपछि उनकी श्रीमतीले सम्बन्ध विच्छेद गरेकी छिन् ।
ती महिलाले ब्लगमार्फत आफ्ना श्रीमानको लाजमर्दो कामको बारेमा बताएकी छिन् । उनका अनुसार उनका पतिले यौनकर्मी महिलालाई पठाउन खोजेको संदेश झुक्किएर उनकै छोरीकहाँ पुगेको थियो।
ती महिलाले ब्लगमा लेखेकी छिन् उनका श्रीमानले आफ्नी छोरीलाई निकै अश्लील म्यासेज पठाएका थिए । ती व्यक्तिले यौनकर्मी महिलालाई पठाउन खोजेको म्यासेज झुक्किएर छोरीकहाँ पुगेको बताइएको छ ।
म्यासेज हेरेपछि छोरी डराएर आमाकहाँ गएकी थिइन् । आमाले म्यासेज हेरेपछि तत्कालै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरिन् । ब्लगमा लेखिएअनुसार ती व्यक्तिले दुई यौनकर्मी महिलालाई यो म्यासेज लेखेका थिए ।
म्यासेजमा ती युवतीहरुलाई आफूले बारमा भेट्ने उल्लेख थियो । यसबाहेक म्यासेजमा ती दुई यौनकर्मी महिलालाई घर आउने अफरसहित अन्य सबै कुरा विस्तारमा लेखिएको थियो । यो सबै १४ वर्षकी छोरीले पढिन् ।
आमाबाबु सम्बन्धविच्छेद गरेर छुट्टिने र पिताले यस्तो काम गरेपछि उनीहरुका १४ र १७ वर्षका दुई छोरी डिप्रेसनको शिकार भएको र उनीहरुको काउन्सिलिङ भइरहेको बताइएको छ । एजेन्सी